File. Southern Africa (South Africa, Namibia), February 1980. Correspondence, ms. notes, background papers, leaflets issued by the Democratic Turnhalle Alliance, draft chronology of Namibian history, itinerary, programmes and report of visit - Visits - Papers of Sir Patrick Wall MP - Archives Hub
Papers of Sir Patrick Wall MPVisitsFile. Southern Africa (South Africa, Namibia), February 1980. Correspondence, ms. notes, background papers, leaflets issued by the Democratic Turnhalle Alliance, draft chronology of Namibian history, itinerary, programmes and report of visit
File. Southern Africa (South Africa, Namibia), February 1980. Correspondence, ms. notes, background papers, leaflets issued by the Democratic Turnhalle Alliance, draft chronology of Namibian history, itinerary, programmes and report of visit
GB 50 U DPW/64/159
Jun 1979 - Mar 1980